Amisom oo Sheegtay inay Dawlada Federaalka ka Gacan siin doonto Baadhista Kufsiyo lagu eedeeyay Ciidanka Dawlada | Salaan Media
Amisom oo Sheegtay inay Dawlada Federaalka ka Gacan siin doonto Baadhista Kufsiyo lagu eedeeyay Ciidanka Dawlada
Muqdisho 15.Aug 2013 (SM)-War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu sheegey in AMISOM ay dowlada soomaaliya kala shaqeyneyso baaritaanada lagu sameeynayo eedeymaha la xiriira in ciidamadooda ay kufsi ka geysteen xerada Maslax ee magaalada muqdisho.
AMISOM iyo dowlada federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay magacaabeen gudi isku dhaf ah oo baaritaano ku sameeya xaqiiqda jirta ka dibna talaabo haboon la qaadi doono hadii la ogaado kiiskaasi iyo sida uu u dhacay ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay AMISOM.
Danjiraha midowga Africa ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Saalax Anadiif ayaa muujiyey sida ay uga xunyihiin eedeymaha kufsiga ah ayna si dhab ah uga shaqeyn doonaan sidii arrimahaasi loo baari lahaa.
“Doorkeena ugu horeeya waa bad baadinta shacabka askari waliba oo AMISOM ahna waa safiirka nabadda waxaana laga filaa in ay dhowraan sharafta iyo karaamada shacabka soomaaliyeed si ay ugu soo laabtaan jawigii wanaagsanaaa oo ay ku noolaayeen” ayuu yiri Anadif
Mr Anadif ayaa ku daray hadalkiisa in kufsiga uu ku xunyahay dhaqanka soomaalida islamarkaana waxyaabaha ugu horeeya ee loo tababaro ciidamada AMISOM ay yihiin difaaca iyo dhowrista shacabka.
Wakiilka midowga Africa ee Soomaaliya Maxamed Saalax Anadiif ayaa sheegey in talaabo ku haboon ay ka qaadi doonaan askarigii ay ku cadaato eedeeyntaasi,isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay dul qaataan mudada baaritaanka uu socdo.
Ugu dambeyntii warmurtiyeedkani ayaa waxaa lagu sheegey in taageerida AMISOM ay qeyb ka qaadatay amaanka iyo ka xoroobidda kooxda argagixisada ah ee Al-shabaab.